၈ လအတွင်း မြန်မာက ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ ၇၉၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့် ၇၁ ဖြစ်လာ – Amara News
၈ လအတွင်း မြန်မာက ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ ၇၉၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့် ၇၁ ဖြစ်လာ
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက်ဟာ ၇၉,၀၀၀ ကျော် ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ထဲမှာ ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့် ၇၁ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးသော ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၃ ရက် မှာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က တကျော့ပြန်ကူးစက်မှုတွေနဲ့အတူ အချိန် ၈ လရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၇၉,၀၀၀ ကျော်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Family members, wearing face masks asapreventive measure against the spread of the COVID-19 novel coronavirus, wait for prisoners to be released from Insein Prison in Yangon on April 17, 2020, as part of an annual amnesty to thousands of prisoners to mark its April New Year holiday. – More thanaquarter of Myanmar’s prison population is to be released, the president’s office announced on April 17, as calls grow to ease pressure on overcrowded jails with coronavirus fears gripping the country. (Photo by Sai Aung MAIN / AFP)
လတ်တလောမှာလည်း အစိုးရက ပြည်သူတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထပ်တိုးမလာစေဖို့ မကြာမီရောက်လာတော့မယ့် ပွင့်လင်းရာသီပိတ်ရက်တွေမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မလိုအပ်ပဲ ခရီးသွားလာတာတွေ၊ လူစူလူဝေးပြုလုပ်တာတွေ မလုပ်ကြဖို့၊ တတ်နိုင်သမျှ နေအိမ်ထဲမှာသာ နေထိုင်ကြဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီဌာနက နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်စွဲနဲ့ ပန်ကြားထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာ ၅၈ ဒသမ ၉ သန်းကျော် ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သန်းနဲ့ချီ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက်ဟာလည်း ၁၁ နိုင်ငံထိ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ Worldometers ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကူးစက်ခံရသူ ၁၂ ဒသမ ၅ သန်းကျော်၊ သေဆုံးသူ ၂၆၂,၅၃၃ ယောက်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကူးစက်ခံရသူ ၉ ဒသမ ၁ သန်းကျော်၊ သေဆုံးသူ ၁၃၃,၇၅၀ ယောက်၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံက ကူးစက်ခံရသူ ၆ သန်းကျော်၊ သေဆုံးသူ ၁၆၉,၀၂၂ ယောက်စီနဲ့ ထိပ်ဆုံး ၃ နိုင်ငံအနေနဲ့ အသီးသီး ရပ်တည်နေပါတယ်။
အဲဒီ ၃ နိုင်ငံနောက်မှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါသန်းနဲ့ချီကူးစက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံတွေအဖြစ် ပြင် သစ်၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ယူကေ၊ အီတလီ၊ အာဂျင်တီးနား၊ ကိုလံဘီယာ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွေက အစဉ် လိုက် ရှိနေခဲ့တာပါ။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုစတင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၈၆,၄၃၁ ယောက်၊ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၄,၆၃၄ ယောက်နဲ့ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း သေဆုံးသူထပ်တိုးမ လာဘဲ နိုင်ငံအလိုက် အမှတ်စဉ် ၆၈ နေရာထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အမြင့်ဆုံး အိန္ဒိယ နိုင်ငံပြီးရင် အီရန်၊ အီရတ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေက ကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၈၅၄,၃၆၁ ယောက်၊ ၅၃၅,၃၂၁ ယောက်၊ ၄၉၇,၆၆၈ ယောက်စီနဲ့ အသီးသီး ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူး စက်ခံရသူဦးရေ ၄၄၇,၃၄၁ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆,၃၈၈ ယောက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပြီးရင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူး စက်ခံရသူဦးရေ ၄၁၈,၈၁၈ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၈,၁၂၃ ယောက်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော ကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်ည ၈ နာ ရီအထိ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၇၉,၂၄၆ ယောက်၊ သေဆုံးသူ ၁,၇၃၉ ယောက်နဲ့ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရသူစုစုပေါင်း ၅၈,၇၅၈ ယောက်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု နဲ့ သေဆုံးမှု အများဆုံး ၃ နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု စုစုပေါင်း ၁ သန်းကျော် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ စောင့်ကြည့်လူနာပေါင်း ၁၅,၅၈၁ ယောက် ရှိနေတယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် ၅၈,၁၆၀ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ အရေအတွက် ထပ်တိုးမလာဘဲ ၂၈ ယောက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၅၄,၇၇၅ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၃၃၅ ယောက် ရှိပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူး စက်ခံရသူ အရေအတွက် ၃,၉၁၃ ယောက်နဲ့ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက် ထပ်တိုးမလာဘဲ အယောက် ၆၀ ယောက် ရှိနေပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၁,၃၀၇ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက် ခုရက်ပိုင်းမှာ တိုးမလာဘဲ ၃၅ ယောက် ရှိနေပြီး ဘရူ နိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၁၄၈ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၃ ယောက် ရှိနေတာပါ။
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ လာအိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ၃၀၆ ယောက်နဲ့ ၂၅ ယောက် အသီးသီးရှိနေပေမယ့် သေဆုံးလူနာ ခုချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူး။
တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လတ်တလောအချိန်ထိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံရ ပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက် ၁ ဒသမ ၃၉ သန်းကျော် ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ရောဂါပြန်လည် ပျောက်ကင်းလာသူ အရေအတွက်ကတော့ ၄၀ ဒသမ ၇ သန်းကျော် ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈ လအတှငျး မွနျမာက ကိုဗဈပိုးတှေ့ ၇၉၀၀၀ ကြျောဖွငျ့ ကမ်ဘာ့ကူးစကျမှုအမွငျ့ဆုံးအဆငျ့ ၇၁ ဖွဈလာ
လကျရှိအခြိနျထိ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျဟာ ၇၉,၀၀၀ ကြျော ရှိလာခဲ့ပွီဖွဈကာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး ၂၀၀ ကြျောထဲမှာ ကူးစကျမှုအမွငျ့ဆုံးအဆငျ့ ၇၁ နရောမှာ ရပျတညျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ပထမဆုံးသော ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ၂၃ ရကျ မှာ တှရှေိ့ခဲ့ပွီး ရခိုငျပွညျနယျက တကြော့ပွနျကူးစကျမှုတှနေဲ့အတူ အခြိနျ ၈ လရှိလာခဲ့ခြိနျမှာတော့ ရောဂါကူးစကျခံရသူစုစုပေါငျး ၇၉,၀၀၀ ကြျောလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာလညျး အစိုးရက ပွညျသူတှကေို ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှု ထပျတိုးမလာစဖေို့ မကွာမီရောကျလာတော့မယျ့ ပှငျ့လငျးရာသီပိတျရကျတှမှော ပွညျသူတှအေနနေဲ့ မလိုအပျပဲ ခရီးသှားလာတာတှေ၊ လူစူလူဝေးပွုလုပျတာတှေ မလုပျကွဖို့၊ တတျနိုငျသမြှ နအေိမျထဲမှာသာ နထေိုငျကွဖို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီဌာနက နိုဝငျဘာ ၁၉ ရကျစှဲနဲ့ ပနျကွားထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာတှရေဲ့ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးဟာ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရခဲ့ကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျထိ ကမ်ဘာတဝနျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူအရအေတှကျဟာ ၅၈ ဒသမ ၉ သနျးကြျော ရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး သနျးနဲ့ခြီ ကူးစကျခံထားရတဲ့ နိုငျငံအရအေတှကျဟာလညျး ၁၁ နိုငျငံထိ ရှိလာခဲ့ပွီ ဖွဈတယျလို့ Worldometers ဝကျဘျဆိုကျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ရောဂါဖွဈပှားမှု အမွငျ့ဆုံးနိုငျငံတှထေဲမှာတော့ အမရေိကနျနိုငျငံက ကူးစကျခံရသူ ၁၂ ဒသမ ၅ သနျးကြျော၊ သဆေုံးသူ ၂၆၂,၅၃၃ ယောကျ၊ အိန်ဒိယနိုငျငံက ကူးစကျခံရသူ ၉ ဒသမ ၁ သနျးကြျော၊ သဆေုံးသူ ၁၃၃,၇၅၀ ယောကျ၊ ဘရာဇီးနိုငျငံက ကူးစကျခံရသူ ၆ သနျးကြျော၊ သဆေုံးသူ ၁၆၉,၀၂၂ ယောကျစီနဲ့ ထိပျဆုံး ၃ နိုငျငံအနနေဲ့ အသီးသီး ရပျတညျနပေါတယျ။
အဲဒီ ၃ နိုငျငံနောကျမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါသနျးနဲ့ခြီကူးစကျခံရတဲ့ နိုငျငံတှအေဖွဈ ပွငျ သဈ၊ ရုရှား၊ စပိနျ၊ ယူကေ၊ အီတလီ၊ အာဂငျြတီးနား၊ ကိုလံဘီယာ၊ မက်ကဆီကိုနိုငျငံတှကေ အစဉျ လိုကျ ရှိနခေဲ့တာပါ။
ရောဂါဖွဈပှားမှုစတငျရာ တရုတျနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ၈၆,၄၃၁ ယောကျ၊ စုစုပေါငျး သဆေုံးသူ ၄,၆၃၄ ယောကျနဲ့ ခုရကျပိုငျးအတှငျး သဆေုံးသူထပျတိုးမ လာဘဲ နိုငျငံအလိုကျ အမှတျစဉျ ၆၈ နရောထိ ကဆြငျးသှားခဲ့ပါတယျ။
အာရှဒသေတှငျး နိုငျငံတှထေဲမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှု အမွငျ့ဆုံး အိန်ဒိယ နိုငျငံပွီးရငျ အီရနျ၊ အီရတျနဲ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံတှကေ ကူးစကျခံရသူဦးရေ ၈၅၄,၃၆၁ ယောကျ၊ ၅၃၅,၃၂၁ ယောကျ၊ ၄၉၇,၆၆၈ ယောကျစီနဲ့ အသီးသီး ရှိနပေါတယျ။
မွနျမာနဲ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတနိုငျငံဖွဈတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူး စကျခံရသူဦးရေ ၄၄၇,၃၄၁ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၆,၃၈၈ ယောကျ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။
အာဆီယံနိုငျငံတှထေဲမှာတော့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံပွီးရငျ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံက ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူး စကျခံရသူဦးရေ ၄၁၈,၈၁၈ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၈,၁၂၃ ယောကျနဲ့ ဒုတိယနရောမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
လတျတလော ကူးစကျမှုတှေ မွငျ့တကျနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကတော့ နိုဝငျဘာ ၂၂ ရကျည ၈ နာ ရီအထိ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာ စုစုပေါငျး ၇၉,၂၄၆ ယောကျ၊ သဆေုံးသူ ၁,၇၃၉ ယောကျနဲ့ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရသူစုစုပေါငျး ၅၈,၇၅၈ ယောကျနဲ့ အာဆီယံနိုငျငံတှထေဲမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှု နဲ့ သဆေုံးမှု အမြားဆုံး ၃ နိုငျငံထဲမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။
လကျရှိအခြိနျထိ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ဓာတျခှဲစဈဆေးမှု စုစုပေါငျး ၁ သနျးကြျော ပွုလုပျခဲ့ပွီးဖွဈကာ စောငျ့ကွညျ့လူနာပေါငျး ၁၅,၅၈၁ ယောကျ ရှိနတေယျလို့ ဝနျကွီးဌာန ဝကျဘျဆိုကျဒျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
စငျကာပူနိုငျငံကတော့ ရောဂါကူးစကျခံရသူအရအေတှကျ ၅၈,၁၆၀ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ အရအေတှကျ ထပျတိုးမလာဘဲ ၂၈ ယောကျ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။
မလေးရှားနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ၅၄,၇၇၅ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၃၃၅ ယောကျ ရှိပါတယျ။
မွနျမာနဲ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတနိုငျငံဖွဈတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူး စကျခံရသူ အရအေတှကျ ၃,၉၁၃ ယောကျနဲ့ ခုရကျပိုငျးအတှငျး သဆေုံးသူအရအေတှကျ ထပျတိုးမလာဘဲ အယောကျ ၆၀ ယောကျ ရှိနပေါတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ၁,၃၀၇ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူအရအေတှကျ ခုရကျပိုငျးမှာ တိုးမလာဘဲ ၃၅ ယောကျ ရှိနပွေီး ဘရူ နိုငျးနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ၁၄၈ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၃ ယောကျ ရှိနတောပါ။
ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ လာအိုနိုငျငံတှမှောတော့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ၃၀၆ ယောကျနဲ့ ၂၅ ယောကျ အသီးသီးရှိနပေမေယျ့ သဆေုံးလူနာ ခုခြိနျထိ မရှိသေးပါဘူး။
တကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ လတျတလောအခြိနျထိ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရ ပွီး သဆေုံးသူအရအေတှကျ ၁ ဒသမ ၃၉ သနျးကြျော ရှိလာခဲ့ပွီဖွဈပွီး ရောဂါပွနျလညျ ပြောကျကငျးလာသူ အရအေတှကျကတော့ ၄၀ ဒသမ ၇ သနျးကြျော ရှိနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Previous Article ကိုဗဈကာကှယျဆေး တနျဖိုး ဘယျလောကျ ရှိနိုငျမလဲ? (အခွခေံလူတနျးစားတှေ လကျလှမျးမီနိုငျပါ့မလား)
Next Article က.ည.န ရုံးတှေ ပွနျဖှငျ့တော့မှာလား၊ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျတှေ ပွနျလုပျလို့ရနပွေီလား မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ